[Review Sách] "Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ": Tiểu Thuyết Tình Yêu Không Chỉ Có Tình Yêu | Anybook.vn - Anybook
[Review Sách] “Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ”: Tiểu Thuyết Tình Yêu Không Chỉ Có Tình Yêu | Anybook.vn
Raha mpankafy tantaram-pitiavana ianao dia tsy ho diso ity boky ity Raha tsy nofinofy ianao by Marc Levy. Ny tantaran’ny fitiavana toa angano eo amin’ny olombelona sy ny fanahy dia lasa iray amin’ireo sangan’asa be mpividy indrindra nataon’ny antitra Marc Levy tamin’ny asa literatiora. Fa rehefa vitako ny mamaky an’io novela io dia tsy maintsy manamafy aho fa tantaram-pitiavana io fa tsy fitiavana ihany ry zalahy a!
Sarotra inoana, sarotra ekena ny zavatra holazaiko aminao, fa raha hihaino ny tantarako ianao, raha manaiky ianao fa milaza ny marina aho dia mety hino ianao amin’ny farany. , ary mety ho toy izany koa ianao, na mino izany ianao na tsia, dia tena zava-dehibe tokoa satria ianao irery no afaka mizara an’io tsiambaratelo io, na dia tsy fantatrao aza.
Nanomboka nifantoka tamin’ity tantara ity aho nanomboka tamin’io fehezan-tenin’i Lauren io.
Na mino na tsia, misy ny vaovao indraindray manao hoe “Taitra tampoka ilay vehivavy torana rehefa afaka taona vitsivitsy, na ilay lehilahy torana, rehefa avy nihaino mozika elaela. , dia nifoha. ” Heveriko fa ny zokintsika Marc Levy dia maka hevitra avy amin’ireo tranga hafahafa ireo ho lohahevitra hanoratana tantaram-pitiavana toa tsy dia misy dikany loatra?
Efa noeritreretinao manjavozavo ve ity tantaram-pitiavana ity? Tena tantaram-pitiavan’ny lehilahy iray sy ny tovovavy iray fony izy torana mafy noho ny lozam-piarakodia. Arthur sy Lauren izy ireo. Ny tantara dia: Taorian’ny lozam-pifamoivoizana i Lauren ary tao anatin’ny tsy fahatsiarovan-tena, dia afaka nandeha na aiza na aiza tiany ny fanahiny saingy tsy nisy fomba ho fantatry ny olona. Arthur no mpanofa ny tranon’i Lauren, ary izy ihany koa no hany mahafantatra ny fisiany. Taorian’izany rehetra izany, i Arthur dia nino fa niresaka tamin’ny fanahy iray izy ary ankoatra izany, ilay hany olona nahafantatra azy.
Noho ny tsy fahatsiarovan-tena naharitra loatra, dia nanapa-kevitra ny dokotera sy ny renin’i Lauren fa hanala ny fantsom-pisefoana mba hampitsaharana ny tsy fahatsiarovan-tena. Arthur, miaraka amin’ny fanahin’i Lauren sy Paul namany, dia nikasa ny hangalatra ny fatin’i Lauren ary hamerina izany any amin’ny tranon’i Arthur fahazazany, amin’ny fanantenana fa mbola ho velona izy. Tao amin’io trano io, i Arthur dia nanana fahafahana hahatsiaro ny fahatsiarovana rehetra momba azy sy ny reniny. Tsarovy ny toroheviny rehetra, tsarovy ny zaridaina raozy mahafinaritra, tsarovy na i Dadatoa Antoine aza – izay nanontany tena foana izy hoe nahoana izy no tsara fanahy tamin’ny reniny sy ny zanany. Noho izany, i Lauren dia nianatra bebe kokoa momba ilay lehilahy tsara fanahy sy mahafatifaty, izay nampanantenainy fa homeny ny fony (na dia tsy fantany izay azony omena azy afa-tsy ny zava-manahirana izay mitranga sy mitranga). Ny fananana an’i Lauren tao an-tranony tamin’ny fahazazany no zavatra tena nahafaly an’i Arthur. Noho izy dia afaka niverina teto, noho izany, dia nanokatra tamin-kerim-po ny valizy “tsiambaratelo” an-dreniny mba hihaino ny olona nitokisany. Arthur sy Lauren, dia nanana fotoana fohy nefa faly tao amin’io trano kely io.
Na izany aza, tsy kely ary mora hadino ny halatra mararin’ny koma. Nanao fanadihadiana ny polisy, ary nitondra ny fatin’i Lauren teny amin’ny hopitaly. Taorian’izany rehetra izany dia tsapan’i Arthur sy Lauren fa natao ho an’ny tsirairay izy ireo, noho ny fahagagana, dia nihaona sy nizara ny zava-drehetra izy ireo, saingy tamin’izay dia nanjavona tsikelikely i Lauren. Nijaly mandra-pahafatiny i Arthur ary nitsangana tamin’ny maty nefa tsy fantany fa ny andro nanjavonan’ny fanahiny teo aminy ihany koa no andro nifohany ka nahagaga ny olona maro. Na ny mpampianatra azy, ilay profesora nanao fandidiana azy aza, dia tsy afaka nanazava ny antony. Tsy afaka nifampiresaka fotsiny izy ireo hoe: “Fahagagana izany”. Ary tany ho any, izy rehetra dia nisaotra mangina an’ilay lehilahy hafahafa izay nangalatra ny fatin’i Lauren nandritra ny fotoana kelikely, ka tsy nahatanteraka ny fikasany mampahory ny hanala ny fofonainy.
READ Review tiểu thuyết Thời gian chỉ dừng lại vì em | Anybook.vn
Tsy niafina tamin’i Arthur ihany ilay polisy misahana ny raharaha halatra marary, fa nampahafantatra azy koa fa nahatsiaro tena i Lauren. Faly erỳ ny nahita an’i Arthur nikarakara an’i Lauren tany amin’ny hopitaly ny sary farany tamin’ilay tantara, ary rehefa nifoha izy ka nanontany azy hoe iza izy, dia naveriny indray ireo teny nolazainy voalohany taminy. ny teneninao dia sarotra inoana, sarotra ekena, fa raha hihaino ny tantarako ianao, raha manaiky ianao fa milaza ny marina aho dia mety hino izany ianao amin’ny farany, ary mino izany na tsia dia tena zava-dehibe satria ianao irery no olona azoko zaraina amin’ity tsiambaratelo ity, na dia tsy fantatrao aza izany.”
Raha ny marina, raha ny famintinana an’ity tantara ity ihany no henoiko, dia heveriko tsotra izao fa normal izany, mety ho théorie ny fitiavana fotsiny izany hoe “Ny fitiavana dia tsy manavaka ny tanora sy ny antitra, na lahy na vavy, na firy taona na lahy na vavy. olona na fanahy, tsy manavaka ny tsara sy ny ratsy na tsy misy antony mihitsy. Fitiavana, fihetseham-po, finoana tanteraka.” Saingy nino aho fa boky tsara izy io, ary lasa tiako indrindra tamin’ireo tantaram-pitiavana hatramin’izao. Ny antony dia satria tantaram-pitiavana ity izay tsy resaka fitiavana ihany. Mitambatra telo ao anatin’ny iray ilay boky: Fitiavana (mazava ho azy), Fitiavan’ny Fianakaviana, ary Finamana.
Raha fintinina etsy ambony, ny fitiavana ny fanahin’i Arthur sy Lauren, mazava ho azy fa angano raha ny tena izy, fa indraindray, ny fiainana koa dia misy fahagagana, sa tsy izany? Tsy afaka misafidy izay tiantsika isika rehefa mahita ny tena fitiavana. Miaraka amin’i Arthur, tsy ampy saina izy hieritreritra lavitra fa ny fitiavana fanahy iray dia midika fa afaka miala amin’ny fotoana rehetra izy, ary avy eo ny maharary azy. Izany dia miaina amin’izao fotoana izao, miaina mifanaraka amin’ny tena fihetseham-ponao.
Ny tantaram-pitiavan’izy ireo, rehefa vita ny famakiana, dia mampitomany ny fon’ny fitiavana. Tena angano io, fa raha mino ianao fa olona iray no anjaranao, teraka hiaraka aminao, dia azo antoka fa hahazo iray amin’ny fiainanao ianao amin’ny farany.
Raha resaka fitiavana ihany ilay tantara dia tsy ho liana loatra aho. Na dia tsy ny tena tetika, fa tena nanohina ny foko ny taratasy azon’i Arthur avy amin’ny reniny (Rtoa Lili) rehefa maty noho ny aretina sy ny taratasy maro hafa tatỳ aoriana, izay na ahoana na ahoana, tamin’ny fotoana mety teo amin’ny fiainany, Arthur nahazo izany. indray.
READ Review sách: Tố Tâm - "tiểu thuyết tình yêu" đầu tiên của Việt Nam | Anybook.vn
Ny taratasy voalohany: Nodimandry Rtoa Lili rehefa 10 taona teo ho eo i Arthur, miaraka amin’ny fananarana “mahereza Arthur”.
Arthur malalan’i Neny
Fantatro fa raha mamaky ity taratasy ity ianao, ao anatin’ny fonao, dia ho tezitra mafy ianao satria nilalao taminao ity fisolokiana ity, ry Arthur, ity no taratasy farany ary koa ny sitrapo. Naverina aminao ny fitiavan’i Neny…
Manan-jo hitomany koa ny lehilahy, Arthur, fantatry ny lehilahy ny alahelo, sa tsy izany? Manomboka izao dia tsy ho eto amin’izao tontolo izao aho hamaly ny fanontanianao tsy manan-tsiny, satria izao no fotoana hahatongavanao ho lehilahy matanjaka sy be herim-po…
Ny fitiavana dia manana tsiro mahafinaritra, ry malala, tokony ho tsaroanao fa raha te handray ianao dia tsy maintsy manome; Tokony ho tsaroanao fa tsy maintsy ho tena ianao raha te hitia olona iray. Ry zanako lahimatoa, matokia ny tsinainao, ataovy marin-toetra amin’ny feon’ny fieritreretanao sy ny fihetseham-ponao, miaina ny fiainanao, ary tsarovy fa iray ihany ny fiainanao. …
Nikarakara ny zava-drehetra i Rtoa Lili mandra-pahalehiben’i Arthur, nifidy ny sekoly ambaratonga faharoa ho an’ny zanany lahy, namita ny anjara birikiny rehetra ary namela kaonty. Ary ny sary faharoa, rehefa nahazo diplaoma tamin’ny lisea i Arthur, dia nangataka tamin’ny tale izy mba handefa ilay taratasy sy ny lakile ho an’i Arthur, miaraka amin’ny toromarika hanokafana azy rehefa nanapa-kevitra i Arthur hiverina any amin’ny trano tranainy misy azy roa.
Arthur, zanaky ny reniny,
Rehefa namaky ity taratasy ity aho, dia nanapa-kevitra ny hiverina tany Karmela tamin’ny farany. Tena tiako ho fantatra hoe, ho halehiben’iza ianao amin’izay?
… Handeha amin’ny varavarana rehetra aho
… Ho any amin’ny biraonao koa aho, hipetraka eo amin’ny latabatra. Ao amin’ny kabinetra dia hahita valizy mainty ianao, raha tianao, raha manana herim-po ianao, sokafy. Misy kahie vitsivitsy izay isan’andro nanomboka tamin’ny andro nahaterahanao ka mandraka androany, nandritra ny fahazazanao dia nibitsibitsika zavatra maro taminao ny reniko….
Ary ao anatin’io valizy io dia misy ny fahatsiarovana ny reny sy ny zanany vavy. Ao anatin’ireo kahie ireo dia misy ny olona natokisan-dRamatoa Lili, tsy reny ihany fa vehivavy ihany koa. Taorian’ny nahafatesan’ny rain’i Arthur tamin’izy telo taona, dia nifindra tao amin’io trano akaikin’ny ranomasina io izy sy i Lili, ary i Dadatoa Antoine no mpiara-monina taminy sy mpiara-mianatra taminy hatramin’ny fahazazany. Lasa tia an’i Dadatoa Antoine izy avy eo, saingy noho izy natahotra ny hampijaly ny rain’i Arthur, natahotra ny lelan’izao tontolo izao, natahotra sao hibanjina azy amin’ny maso hafa i Arthur, dia tsy afaka naneho izany fihetseham-po izany izy. Rehefa avy namaky ireo kahie i Arthur, dia takany hoe nahoana i Dadatoa Antoine no tena tsara fanahy tamin’ny reniny sy ny zanany lahy. Arakaraka ny nitiavany an’ilay reniny efa nodimandry, nanao sorona be loatra ho azy, ho an-drainy, ka hatramin’ny fofon’aina farany dia mbola nitondra tsiambaratelo tsy azo zaraina amin’iza na iza. Nanao sorona ny fahasambarany manokana i Neny mba hahazoan’i Arthur ny fahatsiarovana azy tsara indrindra. Ary miaraka amin’i Arthur amin’izao fotoana izao, mino izy fa tsy misy maharatsy ny ataony amin’i Lauren. Ny zavatra rehetra dia voafidin’ny fo.
READ Những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới từ trước tới nay | Anybook.vn
Tena nanohina ny fo ny zavatra nomanin-dRtoa Lili ho an-janany. Am-polony taona maro taorian’ny nahafatesany, dia mbola nanatrika ny zava-nitranga manan-danja rehetra tamin’ny zanany izy.
Ny tantaran-dRamatoa Lili, dia ny tantara nampidirina am-pahakingana sy ho azy ao anatin’ny tantaram-pitiavana tahaka izao i Marc Levy. Noho izany, dia ampy ny mampiseho ny fitiavantsika ankohonana ara-panahy sy ny miaraka amintsika mandrakariva.
Tantaram-pitiavana, mitondra lesona lalina momba ny fianakaviana. Tsy izay ihany anefa fa milaza amintsika ny tena atao hoe finamanana. Marina fa te hanana namana akaiky toa an’i Paoly ny rehetra.
Rehefa nifankahalala tao amin’ny orinasa iray i Paul sy Arthur dia manana fitoviana maro: avy amin’ny foto-kevitry ny finamanana, ny fitiavana ny fiainana, ny fahazazana feno tafio-drivotra, ary koa ny tsy fahampian’ny fatiantoka sy ny fatiantoka amin’ny lafiny fitiavana. Miara-miaina any ambanivohitra, miakatra araka ny sitrapony, ary avy eo manokatra ny orinasany, dia lasa mpinamana akaiky izy roa, fa tsy mpinamana fotsiny.
Ahoana no hinoanao fa misy fanahy miresaka amin’ny namana. Na ny namany akaiky aza dia raiki-pitia tamin’ny fanahy ary nikasa ny hangalatra olona iray izay torana mafy tany amin’ny hopitaly. Voararan’ny lalàna izany, tsy azo noeritreretina, nefa mbola tsy afaka nanakimpy ny maso i Paul rehefa nanao izany irery i Arthur. Ary noho izany, na dia nanozona sy tsy azony aza ny zavatra nataon’i Arthur, dia mbola mody dokotera izy, nangalatra marary ary nitondra fiara toy ny manidina araka ny baikon’i Arthur. Fitokisana tanteraka amin’ny namanao izany, na dia mitaky fahafoizan-tena aza izany.
Ankoatra izany, ao amin’ity tantara ity dia misy ny antsipiriany momba ny polisy mpanao famotorana. Rehefa niresaka (fanadihadiana) tamin’i Arthur izy, dia nizara momba ny tantara tsy mampino natrehiny i Arthur. Ary azo inoana fa nino an’io tantara io tamim-pahatokiana izy, ka tsy nitondra ny antontan-taratasy momba ny halatra marary teny amin’ny fitsarana. Izy no nanao ny antso dia nampahafantatra an’i Arthur fa nifoha ilay tovovavy tao anatin’ny kôma lalina. Raha tsy izany, dia mbola mihozongozona amin’ny andro mampahory namoy ny ainy i Arthur.
Fehiny, amiko dia tantaram-pitiavana ity tantara ity fa tsy fitiavana ihany.
Ilay tantara, izay natao ho filma taty aoriana, dia hitako koa io sarimihetsika io, fa angamba ny famakiana ilay boky dia mety kokoa. Ny fahatsapana mamaky ny taratasin-dRamatoa Lili amin’ny taratasy dia tsara kokoa noho ny mihaino mamaky azy toy ny ao amin’ny sarimihetsika.
Ary noho ny fiafarana misokatra toy izany, Marc Levy dia nanampy ny ampahany 2 (Mihaona indray), ary ny ampahany 3 (Ny tantaran’ilay bandy – Paul no mpilalao fototra) amin’ny tantara. Fa vakio aloha ary tsapao ny ampahany voalohany.
Famerenana amin’ny antsipiriany nataon’i: HiDi – Bookademy
Araho ny pejy mpankafy Bookademy raha te hanavao vaovao mahaliana momba ny boky amin’ny rohy:
Misoratra anarana ho lasa CTV Bookademy tity rohy ity: http://bit.ly/2Hxkazt
Previous: Steve Jobs là ai? Tiểu sử và những bài học mà CEO quá cố của Apple để lại | Anybook.vn
Next: Danh sách các trường Đại học | Anybook.vn